Fanatsarana ny fampidiran-ketra ao Toliara : Hampiharina ny karatra elektronika -
AccueilSongandinaFanatsarana ny fampidiran-ketra ao Toliara : Hampiharina ny karatra elektronika
Fanatsarana ny fampidiran-ketra ao Toliara : Hampiharina ny karatra elektronika
11/06/2018 admintriatra Songandina 0
Vola mitentina 140 Tapitrisa Ariary isam-bolana no ilain’ny kaomina Toliara entina hampandehanana ny raharaha. Vola mitentina 60 tapitrisa Ariary isam-bolana ihany anefa no miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaomina anatin’ny iray volana. Izany hoe, banga eo amin’ny 80Tapitrisa Ariary eo. Marihina fa ny kaomina Toliara dia miaina amin’ny alalan’ny hetra sy ny fanaovana antontan-taratasy toa ny fanaovana sora-piankohonana, sns…Ny olana anefa, dia tsy marisika ny mponina any Toliara mandoa hetra. Araka ny fanamarihan’ny Ben’ny tanàna, Rabehaja Jean moa dia mahazo vahana ny fifindra-monina an-tanàn-dehibe ao Toliara. Ireo mponina avy any Androy mila ravinahitra no mameno ny tanàna, izay efa mananika ny 10 000 mahery. Ny 9 500 isa amin’ireo dia mpitarika posy. Nefa 4000 ihany ny posy zakan’ny tanànan’i Toliara. Ireto be dia be ireto anefa araka ny fanazavan’ny ben’ny tanàna dia tsy misy mandoa hetra fa alefany any amin’ny tanàna fiaviany ny vola azony.
Manoloana izay indrindra, dia nanambara ny ben’ny tanàna fa hiditra amin’ny fampiasana karatra elektronika amin’ny fandoavana ny hetra. Izany dia hanamafisana ny fampidiran-ketra mba hahafahana mahafantatra ireo mpandoa hetra. Fa mangataka ihany koa ny tenany amin’ireo mpampiasa vola mba hanangana orinasa, mba hanatsarana ny fampidiran-ketra ao Toliara. Satria marihina fa ECD ny ankamaroan’ny mpiasa ao amin’io kaomina io, ka lany handoavana ny karaman’izy ireo ny vola miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaomina.
arts and crafts ideas cheap dans Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet
Habibiana tsy roa aman-tany no nozakain’ny vahoakan’Antananarivo vokatry ny fitiavan-tenan’i Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina ny taona 2009. Nodorana velona ny vahoaka, razana may kila forehitra miisa 25 tsy nisy nahafantarana azy intsony no navoakan’ny ...Tohiny
Marc Ravalomanana-Andry Rajoelina : Hifandamina momba ny 7 Febroary sy 26 Janoary
Henry Rabary-Njaka : “Singa iray amin’ny fampandrosoana ny fampianarana”
arts and crafts ideas cheap: Hands down, Apple's app store wins by a mile. It's a huge selection of all sorts of apps vs a…